लाखौंको कोष खडा गर्ने स्थानीय सरकारले अझै बाँडेनन् राहत « Loktantrapost
लाखौंको कोष खडा गर्ने स्थानीय सरकारले अझै बाँडेनन् राहत
२१ चैत्र २०७६, शुक्रबार १५:२४
मेचीनगर, २१ चैत । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले घर बाहिर ननिस्कन आदेश दिदै लकडाउन गरेको दश दिन बितिसक्दा झापाका अधिकांश स्थानीय तहले विपन्न समुदायलाई राहत वितरण गर्न सकेका छैनन् ।
दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुरलगायतका विपन्न परिवार लामो लकडाउनका कारण भोकमरीमा परेका छन् ।
यस्तो बेला नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले राहत बाँड्न विलम्ब गर्न नहुने नागरिक समाजबाट आवाज उठ्न थालेको छ ।
झापाका ८ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी १५ वटा स्थानीय तहका सरकार छन् । कोरोना कहरसँग जुध्न पालिकाहरुले रु. १० लाखदेखि रु. ५० लाखसम्मको छुट्टाछुट्टै आकस्मिक राहत कोष स्थापना गरेका छन् ।
लकडाउनको १० दिन वितिसक्दा दमक, शिवसताक्षी र कनकाई नगरपालिका बाहेक अरुले विपन्न समुदायलाई राहत वितरण गरेका छैनन् ।
झापाको मेचीनगर, गौरादह, भद्रपुर र अर्जुनधारा नगरपालिकाले राहत वितरणका लागि विपन्न परिवारको लगत सङ्कलन गरिसकेको जनाएका छन् भने अरु गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा त्यस्तो लगत सङ्कलन कार्य अधुरै छ ।
बुद्धशान्ति र कमल गाउँपालिकाले राहत वितरणको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको जनाएका छन् ।
झापामा विपन्न परिवारको लगत सङ्कलन गरेर राहत वितरण गरिसक्ने पहिलो स्थानीय तह शिवसतासी नगरपालिका हो ।
रु. १० लाखको कोरोना विपत कोष खडा गरेको शिवसताक्षी नगरपालिकाले एक साता पुग्ने गरी चामल, दाल, तेल लगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य सामान विपन्न परिवारलाई वितरण गरिसकेको छ ।
नगरका प्रमुख चन्द्रकुमार शेर्माले भने–‘विपन्न परिवारको घरमा विहान बेलुकाको चुलो बाल्ने अवस्था छैन, अब लकडाउन लम्बियो भने दोस्रो चरणको राहत पनि बाड्ने तयारीमा छौं ।’
उनले परिवारको सङ्ख्या हेरेर एक हप्ताका लागि १० देखि १५ केजीसम्म चामल, तेल र नुन वितरण गरेको बताए ।
झापामा सबैभन्दा धेरै बजेट भएको मेचीनगर नगरपालिकाले रु. ५० लाखको प्रकोप व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ । तर विपन्न परिवारको सङ्ख्या धेरै सङ्कलन भएपछि कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने उल्झनका कारण नगरपालिकाले राहत वितरण कार्य सुरु गर्न सकिरहेको छैन ।
मेचीनगरमा ४ हजार ९५ जना विपन्न परिवारको नाम टोल विकास संस्था र वडाहरुले कार्यपालिकामा पठाएको नगरका विपत व्यवस्थापन समितिका संयोजक टिकाराम मग्रातीले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा ३ हजार परिवारलाई मात्र राहत वितरण गरिने तयारी भइरहेको छ ।
विपत कोषमा पर्याप्त बजेट रकमान्तर नगरेको र विपन्न परिवारको लगत पहिल्यै संकलन नभएका कारण स्थानीय तहका सरकारहरु लकडाउनबाट पीडित विपन्न परिवारलाई चाँडो राहत वितरण गर्न असमर्थ भएका हुन् ।
निर्वाचित भएर आएको दुई बर्षवितिसक्दा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका विपन्न समुदायको लगत सङ्कलन गरेका थिएनन् । अहिले दौडाहा चलाएर हतारोमा लगत सङ्कलन गरिरहेका छन् ।
मेचीनगर नगरपालिकाले टोल विकास समिति मार्फत लगत सङ्कलन गरेको छ । अरु नगर तथा गाउँपालिकाहरुले समेत वडा कार्यालय र टोल विकास संस्थामार्फत लगत सङ्कलन गरेका छन् ।
प्रदेश नम्बर १ का सांसद गोपाल बुढाथोकी र नेपाली काङ्ग्रेस झापाका कोषाध्यक्ष केशवराज पाण्डेले नगर तथा गाउँपालिकाहरुलाई राहत वितरणमा विलम्ब नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘मैले लकडाउनको दोस्रो तेस्रो दिनदेखि नै राहतको तयारी छिटौ गरौं भन्दै आएको छु,’ सांसद् गोपाल बुढाथोकीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–‘गरीवहरुले भोकै मर्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन, छिटोभन्दा छिटो राहत वितरण गरियोस् भनी नगरपालिकालाई आग्रह गर्दछु ।’
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवम् नेपाली काङ्ग्रेस झापाका कोषाध्यक्ष केशवराज पाण्डेले बैठक र मिटिङले मात्र विपन्नको भेट नभरिने जनाउँदै तत्काल राहत वितरण गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘बैठक र मिटिङले मात्र गरीवको पेट भरिदैन,’ पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्–‘अभिभावकको रुपमा रहेका स्थानीय सरकारहरुले राहत बाँड्न ढिलाई गर्नै हुँदैन ।’
दमक नगरपालिकाले नगरका दुई हजार २०० विपन्न परिवारलाई आज विहानदेखि नै घरघरमा राहत पुर्याउन सुरु गरेको जनाएको छ । नगरका प्रमुख रोमनाथ ओलीले परिवार सङ्ख्या हेरेर चामल, दाल, तेल, चिउरा, नुन र साबुन वितरण गरिएको बताए ।
उनले नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिले घरघरमै पुगेर राहत दिएको बताए । दमक नगरपालिकाले विपन्न परिवारका लागि ६४ हजार केजी चामल खरिद गरेर राखेको जनाएको छ ।
नगर प्रमुख ओलीका अनुसार एक जना भएको परिवारलाई १० केजी चालम, १ केजी, दाल, तेल र चिउरा, दुई जनाको परिवारलाई २० केजी चामल, दाल, तेल, ३ देखि ४ जनाको परिवार भएकालाई २५ केजी चामल, दुई केजी दाल, ५ देखि ६ जनाको परिवारलाई ३५ केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर तेल र ६ देखि ८ जनाको परिवारलाई ५० केजी चामल, तीन केजी दाल, २ केजी चिउरा, २ लिटर खाने तेल वितरण गरिएको छ ।
त्यसैगरी, गौरादह नगरपालिकाबाट पहिलो चरणमा तीन हजार २०० परिवारलाई प्रति परिवार १० केजी चामल, एक केजी दाल र एक लिटरका दरले तेल वितरण गरिने नगर प्रमुख रोहितकुमार साहले बताए ।
अम्बिका भण्डारी / (रासस)
सबै तस्वीर : नरेश मोहोरा ।